Dad Ku Dhaawacmay Gaadhi La Jiidhsiiyey Dad Ka Soo Baxay Salaad Magaalada London – Heemaal News Network
HomeWararka Af SoomaligaCaalamkaDad Ku Dhaawacmay Gaadhi La Jiidhsiiyey Dad Ka Soo Baxay Salaad Magaalada London
Dad Ku Dhaawacmay Gaadhi La Jiidhsiiyey Dad Ka Soo Baxay Salaad Magaalada London
Tiro badan oo dad ah ayaa dhaawac uu soo gaaray kadib markii gaari la jiirsiyay dad wadada marayay meel u dhaw masjidka ku yaala waqooyiga London.
Dhacdadan ayaa boolisku ay ku tilmaameen shil aad u weyn.
Hal qof ayaa lagu qabtay meel u dhaw masjidka xaafadaasi ku yaala ee Finsbury Park.
Shilkan waxa uu ka dhacay Wadada Seven Sisters. Ciddamada booliska ayaana goobta ku sugan.
Guddiga Muslimiinta ee Britain ayaa sheegay in gaari si ula kac ah loo jiirsiiyay dad cibaadeysanayay.
Dadka dhacdadaasi ku waxyeeloobay ayaa la aamminsan yahay inay kasoo laabteen salaada tahajudka .
Adeega gawaarida gurmadka degdega ah ee London ayaa sheegay in goobta weerarku ka dhacay ay u direen tiro ka mid ah shaqaalahooda caafimadka .
Muuqaal baraha bulshada lasoo gelliyay dhacdada kadib ayaa muujinaya argagaxa goobtaasi ka dhacay iyadoo dadka halkaasi ku dhawacmayna loo gurmaday.
LondonUnited Kingdom	English News	Syria conflict: US jet ‘downs Iranian-made drone	English News	Shabaab details last week’s deadly assault in northern Somalia	English News	Somali survivors tell of bloody restaurant siege by rebels	English News	Hargeisa To Join Air Arabia’s African Network	English News	FACT FILE: Climate change, food security, and adaptation	English News	‘There is no blockade… Qatar is free to go,’ says Saudi FM	English News	UAE expels Somali from Ramadan competition over Qatar row	English News	AFRICOM Imam Leads First Iftar Uith U.S., SNA Leaders	English News	Landlocked Ethiopia Eyes Role in DP World-Managed Somali Port	English News	Somalia’s president vows revenge on al Shabaab after deadly attack	PreviousBadhasaab RAmaax Oo Digniin U Diray Beelaha Gabooye Ee Deegaamaynta Cusub ka Wada Togdheer
NextXisbiga Madaxweyne Macron Oo Ku Guulaystay Aqlabiyadda Baarlamaanka Faransiiska
Banaadir	Khayre Oo Kulan La Yeeshay Wasiir Socdaal Ku Ahaa Garoonka Dayaaradaha Muqdisho	17th June 2017
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa maanta garoonka diyaaradaha Muqdisho kula kulmay Wasiirka Horumarinta Caalamiga ee UK Ms Priti Patel Kulanka ayaa looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin taageerida UK ee Soomaaliya iyo […]
Caalamka	UK Oo Gawaadhida Miinooyinka Qarxiya Ku Wareejisay Ciidamada Kenya	8th April 2017
Xoghayaha Ciidamadda hubeysan ee dalka Britain, Mike Penning waxa uu Dowladda Kenya ku wareejiyay 6 gaadiidka lagu qarxiyo Miinooyinka iyo qalab kale oo ciiddanka Kenya ka taageerayo sidii ay uga hor tagi lahaayeen qaraxyadda muddada […]
Caalamka	Wadahadalada Kala Guurista UK Iyo Midawga Yurub Oo Maanta Ka Furmaya Brussels	19th June 2017
Maanta oo Isniin ah waxaa magaalada Brussels ka furmaya shirkii ugu horreeyay ee dalka Britain uu rasmi ahaan kaga baxayo ururka Midowga Yurub. Waxaa kulankaas ka qayb gelaya wasiirka dowladda UK u qaabilsan ka bixidda […]